Xa i-Instagram isebenza ngoku namhlanje ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Xa i-Instagram isebenza namhlanje
Julayi 24, 2019 0 IiCententarios 2321
Imfihlo yinto ethandwa ngabantu abaninzi nakwiinethiwekhi zentlalo zabelana ngomxholo ongabonwa ngabanye abantu. Ngale ndlela Umsebenzisi ngamnye unoxanduva lolwazi afuna ukubanika lona malunga nabo. Kodwa kukho imisebenzi phakathi kwamaqonga abantu abaninzi abaziva bekhululekile ngawo kwaye abanye bacinga ukuba baveza idatha engaphezulu kunaleyo bafuna ukuyenza, njengoko kunjalo ngemiyalezo xa i-Instagram isebenza namhlanje.
Ezi mpikiswano zinazo ezinye iinethiwekhi zentlalo ntle ezinayo WhatsApp y Facebook, ngoku ikwayinxalenye ye-Instagram. Kodwa yintoni lo msebenzi uqulethwe yinguqulelo yesi sicelo, siza kukucacisela apha ngezantsi.
Ithetha ukuthini xa i-Instagram isebenza namhlanje?
Kwimibandela ngokubanzi kuthetha ukuba ifowuni ongene kuyo, iqhagamshelwe kwi-Intanethi okanye, ukusilela oko, umsebenzisi uvule isixhobo sakho. Ke ngoko Sisilumkiso sokuba umntu uyasebenza namhlanje okanye ngexesha lokwenyani kwi-Instagram, kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nokuba awukafundanga umyalezo owuthumele kumsebenzisi okanye awuphendulanga. Ngapha koko, ngaphakathi kwezona phuculo zamva akupheli nje ukuba ixesha lokugqibela liqhagamshelwe, Ngendlela efanayo ikwazisa xa ubhala kwincoko.
Ungazi njani xa umntu edibene
Uya kubona ngokulula kwi Imiyalezo ye-Instagram isalathiso esifana nesangqa esiluhlaza kwiprofayile yomntu, kwaye xa umsebenzisi engasasebenzi, igama lakhe liza kuvela kwakudala.
Kodwa uyabona ukuba iqhagamshelwe ukuba nobabini kunye nomnye umntu ninomsebenzi osebenzayo kwaye ukuba loo msebenzisi ulandela kwi-Instagram. Ngokuphathelene noku, Iiakhawunti ozilandelayo kwisicelo ziyakwazi nokwazi ukuba uqhagamshelwe. Ukongeza, iyasebenza kwabo bangakulandeliyo, kodwa ngaxa lithile uthengise umyalezo ngqo.
Kwenzeka ntoni xa i-Instagram ihlaziya umsebenzi weasethi namhlanje?
Olunye uthungelwano loluntu njenge-Twitter lwalusetyenziselwa ukubonisa ukungoneliseki kwabo ngokuhlaziywa kwe-Instagram, phakathi kweyona nto ibalulekileyo kwezikhalazo: "I-Instagram ibala ukhetho lokungahoyi abanye."
Ngokufanayo, iiposti ku-Facebook zabonwa ezibonisa ukungoneliseki kwabantu abaninzi ababanga ukuba yi-Instagram kuphela kwesicelo abanokuthi babe ngaphakathi ngaphandle kwabanye abasebenzisi.
Kwaye impendulo ye-Instagram kwezi mpendulo zinempikiswano malunga nokuphucuka kwemiyalezo yayo kukuba zinika abasebenzisi bazo ithuba lokuba Yibakho ngakumbi kwezo ncoko ngexesha langempela.
Kodwa konke akuphulukwanga, kuba kunokwenzeka ukususa esi saziso okanye ukukhubaza lo msebenzi.
Ungazifihla njani xa usebenza ku-Instagram namhlanje
Njengoko esi sangqa singohlobo oluphuculweyo lwe "unxibelelwano lokugqibela" Bendinayo ngaphambili kwe-Instagram, inkqubo yokuyekisa ukusebenza iyafana kakhulu.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiprofayile yomsebenzisi kwaye ucofe iqhosha lokukhetha, ngokwenza oko uya kuvula imenyu yokuthoba apho uza kufumana icandelo Ubumfihlo nokhuseleko. Emva koko ngaphakathi kwayo uya kufumana igama "Imeko yomsebenzi".
Nje ukuba ungaphakathi kwecandelo uya kuboniswa ngeendlela ezimbini, enye yazo "Bonisa imeko yomsebenzi" ethi, xa ikhubazekile, ithintele abanye abasebenzisi ukuba babone ukuba uqhagamshele, kodwa ngendlela eya kwenzeka kuwe, ngekhe ukwazi ukubona xa abanye abantu bekwi-intanethi.
Kwelinye icala kukho ukhetho lwesibini ekubhekiselelwa kulo xa ubhala okanye usebenzisa ikhamera ukuphendula incoko. Ngale ndlela, lo msebenzi ufana nabanye abathunywa abanjengoWhatsApp kunye nee-Facebook Messenger application.
Ke xa ubhala kwincoko, kuvela omnye umntu "Ukubhala" ecaleni kweprofayile yakho. Kwelinye icala, ukuba ufumana usebenzisa ikhamera ukuphendula, isicatshulwa siyaboniswa "Kwikhamera". Ukuthintela lo msebenzi ukuba uvele kufuneka uphindaphinde inkqubo efanayo nale ikhankanywe apha ngasentla, umahluko ukuba ngoku kuya kufuneka wenze i-esebenzayo isitsho "Bonisa umsebenzi kwincoko".
Ukongeza lo msebenzi awuphindezeli, ke, nangona wenza ukuba abanye abasebenzisi bangakubona xa ubhala okanye usebenzisa ikhamera, ungaqhubeka nokubona xa abanye abantu bekubhalela kwincoko, ngelixa benomsebenzi osebenzayo.
Izinto eziluncedo kwi-Instagram posting esebenzayo namhlanje
Kwabanye kuyanceda xa i-Instagram ibeka imiyalezo yakho ngokuthe ngqo esebenzayo namhlanje, kuba baziva incoko ngexesha langempela Basenokuba nomnye umsebenzisi. Bakwafumana kufanelekile ukwazi ukuba loo mntu bafuna ukwenza naye intetho use-intanethi, ukuba kutsha nje okanye kwakudala ndiyayeka ukusebenza phakathi kwesicelo.
Enye into abayithatha njengento emnandi xa beyinxibelelanisa nabathunywa bezinye iinkqubo, bayakwazi Ndiva ukuba nakweliphi na iqonga banokunxibelelana ngendlela efanayo. Oko kukuthi, banako kwi-Instagram, bobabini babelane kwaye bajonge umxholo wabanye abantu kwaye ngaxeshanye babe nengxoxo njengoko bebeya kuba nayo kwi-WhatsApp okanye kwi-Facebook.
Ke ngoko ukudityaniswa kwesicelo okulindelwe ukufezekiswa ukwenza ukuhlala ngaphakathi kube mnandi ngakumbi Isebenzile yabasebenzisi bayo abaninzi. Ngale ndlela ikwenza ukuba abantu bahlale ixesha elide ngaphakathi eqongeni, njengoko inikezela ngeenkonzo ezininzi.
Ukungancedi ukusebenzisa i-asethi namhlanje
Kubasebenzisi abaninzi be-Instagram, eli nqaku elitsha laba lilususelo labucala abathanda ukuba nalo kwisicelo. Ngokuphathelene noku, ungathi elinye icala lengqekembe alivumelani nohlaziyo olutsha kwaye uqinisekise ukuba imiyalezo yothungelwano lwentlalo ibingcono ngaphambili, xa ibingaboneleli ngolwazi oluninzi kangangokuba abasebenzisi abaninzi abafuni ukwabelana.
Ngaphezu koko imele ukuba ngoku kunzima ukungahoyi umntu kwi-Instagram, kuba uyayiqonda ngokulula le nyaniso. Oko kukuthi, awusayi kuhamba ungabhekiswa sisicelo, kuba uya kuxelelwa ixesha elikuyo.
Kungenxa yezi zizathu uninzi lubonisa ukungoneliseki kwabo yinto entsha ngeakhawunti yeqonga. Nangona kunjalo, inxenye efanelekileyo yayo yonke imeko kukuba unakho ukuwenza usebenze kukucwangciswa njengoko besitshilo ngaphambili. Kwaye ngale ndlela gcina iimpawu ezisoloko zinomyalezo othe ngqo kwi-Instagram.
Xa u-Instagram eSebenza namhlanje kwaye esebenzayo ngoku
Xa ungena kwincoko yomntu kwi-Instagram, iya kukubonisa ukuba badibene okanye akunjalo, amagama "Ebekhona namhlanje", "Ebesebenza izolo", "Ebekade esebenza" ziireferensi zexesha ezibonisa ukuba umsebenzisi uxhunyiwe kude kangakanani okanye
Kumcimbi oshiya usebenze namhlanje, kungenxa yokuba namhlanje ibikhona kodwa ngela xesha okwincoko yakho ayinjalo.
Kwelinye icala, ukuba igama liyavela "Uyasebenza ngoku" nechaphaza eliluhlaza kumfanekiso weprofayile, kuthetha ukuba eubona umntu odibene ngexesha langempela. Eli nqaku linceda abasebenzisi abaninzi ukuba bafumane kwaye babhalele abantu nje xa bekwi-intanethi kwaye baseke incoko ngqo.
Kodwa uninzi lwabantu abaninzi lucinga ukuba lubangela iingxaki kudibaniselwano nabasebenzisi, kule Instagram ibanga ukuba ezo mpawu ziyongeze kwimiyalezo engqalileyo Yindlela yokwenza iingxoxo ezingamanzi ngakumbi kwaye wazi ukuba umntu uyathetha ngokwenene okanye uqhagamshele kwaye akafuni ukuthetha nawe.
Kwaye ke kwenzeka ntoni kwiimeko apho ufuna ukunqanda umntu? kuvela ukuba la mathuba umsebenzi omtsha uba yingxaki kwaye akuncedi nangayiphi na indlela ukuba kwelinye icala ufuna ukunqanda ingxaki.
Ngaba i-Instagram ibingcono ngaphandle kwee-asethi namhlanje?
Akukho mpendulo imele uluvo olunye, ngoba, Uninzi lwabantu luyavumelana kunye nolunye uhlaziyo abalwenzileyo kwisicelo. Ngelixa abanye bebonakalisa ukungoneliseki kwabo zizinto ezenziweyo ezikhupha ngasese imfihlo yokuba isicelo sasinaso kwasekuqaleni.
Kodwa kukho into ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kwaye zombini ezo zinto yi-Instagram kunye ne-WhatsApp kunye ne-Facebook usetyenziso lweMark Zuckerberg firm, Ke kucingelwa ukuba le nkampani yezigidi ijonge ukunxibelelana ngendlela efanayo kubo bonke abasebenzisi bayo kuwo onke amaqonga kunye neendlela ezinikela ngazo.
Ngale ndlela kucingelwa ukuba iyindlela yokufikelela kwingqwalaselo epheleleyo yabantu kuso nasiphi na isicelo ngelixa ufezekisa i-fusion epheleleyo ethanda izigidi zabantu.
Kwaye nangona abanye bengonelisekanga, bagqibela ngokuthanda kwaye baziqhelanisa nayo yonke into entsha. Yiyo loo nto siqhubeka ukubheja kwisicelo ngasinye, Kusakholelwa kule nkampani kwaye ngokuqinisekileyo ukuveliswa kwezinto ezintsha kuyaqhubeka kutyiwa.
1 Ithetha ukuthini xa i-Instagram isebenza namhlanje?
1.1 Ungazi njani xa umntu edibene
2 Kwenzeka ntoni xa i-Instagram ihlaziya umsebenzi weasethi namhlanje?
3 Ungazifihla njani xa usebenza ku-Instagram namhlanje
4 Izinto eziluncedo kwi-Instagram posting esebenzayo namhlanje
5 Ukungancedi ukusebenzisa i-asethi namhlanje
6 Xa u-Instagram eSebenza namhlanje kwaye esebenzayo ngoku
7 Ngaba i-Instagram ibingcono ngaphandle kwee-asethi namhlanje?
Julayi 22, 2019
Xa i-instagram ibhloka i-akhawunti
Ungazikhuphela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kwengxaki?